World Ranking တရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာနေသော သက်ထားသူဇာနင့် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်အလားအလာ - သတင်းရွာ
ကျနော်တို့ ရဲ့ အချစ်တော်လေး မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ကြက်တောင်အားကစားမယ်လေး သက်ထားသူဇာဟာ ၂၀၂၀ မှာ ကျင်းပမဲ့ တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ အားလုံးပဲ အသိပါ
အိုလံပစ်မှာ သတ်မှတ်တဲ့အဆင့်ဝင်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကို ဆက်တိုက်ကစားခဲ့တဲ့ သက်ထားသူဇာဟာ ခုချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၆၆ မှာ ရပ်တည်နေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ခုလက်ရှိအဆင့်နဲ့ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ကို ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ အလားအလာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်
ကြက်တောင်အားကစားနည်းဆိုတာ အာရှနိုင်ငံအများစုက ကမ္ဘာ့အဆင့်ထိပ်ပိုင်းတွေမှာ ကြီးစိုးထားနိုင်တဲ့ အားကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်….၁၉၉၂ ခုနှစ် ဘာစီလိုနာ အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲ ကတည်းကစလို့ တရုတ်နိုင်ငံဟာ အိုလံပစ် ကြက်တောင် ကစားနည်းကနေ စုစုပေါင်း ၃၂ နှစ် အထိ ရရှိထားပြီး အအောင်မြင်ဆုံးနိုင်ငံပဲ ဖြစ်ပါတယ်
တရုတ်နိုင်ငံနည်းတူ တောင်ကိုရီးယား၊ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားတို့ကလည်း ကြက်တောင်လောကမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် အိုလံပစ်ကြက်တောင် အားကစားနည်းတွေကို ပြိုင်ပွဲ ၅ မျိုး သတ်မှတ်ကျင်းပတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
အမျိုးသား/အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲနဲ့ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး ပေါင်းပြိုင်ရတဲ့ ပြိုင်ပွဲ ဆိုပြီး ၅ မျိုးရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…..သက်ထားသူဇာကတော့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကော်မတီက ကြက်တောင် ကစားနည်းအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင် ကစားသမား စုစုပေါင်း ၁၇၂ ယောက် ထိ ခွင့်ပြုဖို့ လျာထားတယ်လို့ သိရပြီး သက်ထားသူဇာဝင်ပြိုင်မဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲအတွက် အချိုးကျလျာထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ဦးရေကတော့ ၃၈ ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ဒီ ၃၈ ယောက်ထဲမှာ အိမ်ရှင် အတွက် ၁ ယောက်နဲ့ Tripartite Commission က ဖိတ်ခေါ်မယ့် ၃ ယောက်ရှိပြီးတော့ ၃၄ ယောက်ကသာ Qualification အဆင့်ကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်… ဒါကြောင့် သက်ထားသူဇာဟာ ကျန်တဲ့ ၃၄ ယောက်ထဲမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
အဲဒီ 34 ယောက်ထဲမှာ ပြိုင်ပွဲဝင် အားလုံးဟာ အိုလံပစ်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ညီအောင် ကမ္ဘာ့ကြက်တောင် အဖွဲ့ချုပ်အောက်မှာ ရှိတဲ့ တိုက်ကြီး ၅ တိုက် တို့ကို ကိုယ်စားပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Qualification ကာလကတော့ ၂၉-၄-၂၀၁၉ ရက်ကနေ ၂၆-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိဖြစ်ပြီးတော့ ကစားသမားတွေဟာ မိမိနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေကို အနည်းဆုံး ၃ ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
အဲဒီပြိုင်ပွဲတွေက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရပ်တည်မှုတွေ အပေါ် မူတည်ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေ ထုတ်ပေးပါတယ်….နောက်တခုရှိတာက ကမ္ဘာ့အဆင့် ၃၄ အတွင်း ဝင်တိုင်း အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရနိုင်သေးတာမဟုတ်ပါဘူး… အောက်ကစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ပြန်ကြည့်ပါသေးတယ်…
1. နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဟာ တစ်နေရာစာသာ ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင် ကစားခွင့် ရရှိမှာပါ…
2. ဒါပေမဲ့ တစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ကစားသမားတွေဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၆ အတွင်း ၂ ဦးထက်ပိုပြီးဝင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီ နိုင်ငံဟာ ကစားသမား နှစ်ဦး အထိ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိပါတယ်
3. အတွဲလိုက်မှာတော့ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းက အဆင့် ၈ အတွင်း ၂ နေရာထက် ပိုရတယ်ဆိုရင် အတွဲလိုက် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ခွင့် ၂ နေရာ အထိ ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်နောက်တစ်ချက်က တိုက်ကြီး ၅ တိုက်လုံးက ကစားသမားတွေ အားလုံးပါဝင်ရမယ်ဆိုတာကြောင့် ကြက်တောင်အားကစားနည်းမှာ ထိပ်တန်းမှာရှိမနေတဲ့ တိုက်ကြီးက နိုင်ငံတွေက အလိုအလျောက် အနည်းဆုံး ၁ ဦးစီတော့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရအုံးမှာပါ
ဒါကြောင့် ကြက်တောင်အားကစားနည်းမှာ အားနည်းတဲ့ အာဖရိက နဲ့ သမုဒ္ဒရာပိုင်း ဇုံက အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ ကစားသမားတွေကတော့ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
သက်ထားသူဇာဟာ လက်ရှိအဆင့်နဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူ့အတွက် အိုလံပစ်ဝင်ခွင့်မျှော်မှန်းလို့ ရပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အရည်အချင်းစစ်ကာလက ၂၆-၄-၂၀၂၀ မှ ကုန်ဆုံးမှာဆိုတော့ ဒီအတောအတွင်းမှာ အခြားသူတွေက ပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်ပြိုင်ရင်း ကမ္ဘာ့အဆင့်တွေ မြင့်လာနိုင်တာကြောင့် ဆက်လက်ကြိုးစားရအုံးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာ အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိသေးတာက သတ်မှတ်အရည်အချင်းမဝင်ရင်တောင် Tripartite Commission က ဖိတ်ခေါ်မဲ့ ၃ နေရာစာအတွက် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားခွင့်ရှိနေသေးတာပါ
ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း သက်ထားသူဇာ အဆင့်တွေတက်လာဖို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတိုင်း အနိုင်ရဗိုလ်စွဲ အောင် အားပေးကြပါအုံးလို့ တိုက်တွန်းရင် သက်ထားသူဇာရဲ့ အိုလံပစ်မျှော်လင့်ချက် အလားအလာလေးကို မျှဝေလိုက်ရပါတယ်နော်
ကနြျောတို့ ရဲ့ အခဈြတျောလေး မွနျမာ့လကျရှေးစငျကွကျတောငျအားကစားမယျလေး သကျထားသူဇာဟာ ၂၀၂၀ မှာ ကငျြးပမဲ့ တိုကြိုအိုလံပဈပွိုငျပှဲမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျပွီး နိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျဖို့ ကွိုးစားနတော အားလုံးပဲ အသိပါ
အိုလံပဈမှာ သတျမှတျတဲ့အဆငျ့ဝငျနိုငျဖို့ နိုငျငံတကာပွိုငျပှဲတှကေို ဆကျတိုကျကစားခဲ့တဲ့ သကျထားသူဇာဟာ ခုခြိနျမှာတော့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ၆၆ မှာ ရပျတညျနနေိုငျတာပဲ ဖွဈပါတယျ…. ခုလကျရှိအဆငျ့နဲ့ အိုလံပဈပွိုငျပှဲ ကို ဝငျရောကျနိုငျဖို့ အလားအလာဘယျလောကျရှိလဲဆိုတာကို အောကျမှာ ဖျောပွပေးသှားပါ့မယျ
ကွကျတောငျအားကစားနညျးဆိုတာ အာရှနိုငျငံအမြားစုက ကမ်ဘာ့အဆငျ့ထိပျပိုငျးတှမှော ကွီးစိုးထားနိုငျတဲ့ အားကစားနညျးဖွဈပါတယျ….၁၉၉၂ ခုနှဈ ဘာစီလိုနာ အိုလံပဈ ပွိုငျပှဲ ကတညျးကစလို့ တရုတျနိုငျငံဟာ အိုလံပဈ ကွကျတောငျ ကစားနညျးကနေ စုစုပေါငျး ၃၂ နှဈ အထိ ရရှိထားပွီး အအောငျမွငျဆုံးနိုငျငံပဲ ဖွဈပါတယျ
တရုတျနိုငျငံနညျးတူ တောငျကိုရီးယား၊ မလေးရှားနဲ့ အငျဒိုနီးရှားတို့ကလညျး ကွကျတောငျလောကမှာ နာမညျကွီးတဲ့ နိုငျငံတှပေဲ ဖွဈပါတယျ အိုလံပဈကွကျတောငျ အားကစားနညျးတှကေို ပွိုငျပှဲ ၅ မြိုး သတျမှတျကငျြးပတာပဲ ဖွဈပါတယျ
အမြိုးသား/အမြိုးသမီး တဈဦးခငျြးပွိုငျပှဲ၊ အမြိုးသား/အမြိုးသမီး နှဈယောကျတှဲပွိုငျပှဲနဲ့ အမြိုးသား + အမြိုးသမီး ပေါငျးပွိုငျရတဲ့ ပွိုငျပှဲ ဆိုပွီး ၅ မြိုးရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ…..သကျထားသူဇာကတော့ အမြိုးသမီးတဈဦးခငျြးပွိုငျပှဲကို ဝငျပွိုငျဖို့ ရညျမှနျးခကျြထားရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ
အိုလံပဈပွိုငျပှဲကျောမတီက ကွကျတောငျ ကစားနညျးအတှကျ ပွိုငျပှဲဝငျ ကစားသမား စုစုပေါငျး ၁၇၂ ယောကျ ထိ ခှငျ့ပွုဖို့ လြာထားတယျလို့ သိရပွီး သကျထားသူဇာဝငျပွိုငျမဲ့ အမြိုးသမီးတဈဦးခငျြးပွိုငျပှဲအတှကျ အခြိုးကလြာထားတဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျဦးရကေတော့ ၃၈ ယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ
ဒီ ၃၈ ယောကျထဲမှာ အိမျရှငျ အတှကျ ၁ ယောကျနဲ့ Tripartite Commission က ဖိတျချေါမယျ့ ၃ ယောကျရှိပွီးတော့ ၃၄ ယောကျကသာ Qualification အဆငျ့ကို ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ရနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ… ဒါကွောငျ့ သကျထားသူဇာဟာ ကနျြတဲ့ ၃၄ ယောကျထဲမှာ ပါဝငျနိုငျဖို့ ကွိုးစားရမှာ ဖွဈပါတယျ….
အဲဒီ 34 ယောကျထဲမှာ ပွိုငျပှဲဝငျ အားလုံးဟာ အိုလံပဈဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ ညီအောငျ ကမ်ဘာ့ကွကျတောငျ အဖှဲ့ခြုပျအောကျမှာ ရှိတဲ့ တိုကျကွီး ၅ တိုကျ တို့ကို ကိုယျစားပွုရမှာ ဖွဈပါတယျ။ Qualification ကာလကတော့ ၂၉-၄-၂၀၁၉ ရကျကနေ ၂၆-၄-၂၀၂၀ ရကျနအေ့ထိဖွဈပွီးတော့ ကစားသမားတှဟော မိမိနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ ပွိုငျပှဲတှကေို အနညျးဆုံး ၃ ပှဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ…
အဲဒီပွိုငျပှဲတှကေ ထှကျပျေါလာတဲ့ ရပျတညျမှုတှေ အပျေါ မူတညျပွီး ကမ်ဘာ့အဆငျ့သတျမှတျခကျြတှေ ထုတျပေးပါတယျ….နောကျတခုရှိတာက ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ၃၄ အတှငျး ဝငျတိုငျး အိုလံပဈပွိုငျပှဲဝငျခှငျ့ရနိုငျသေးတာမဟုတျပါဘူး… အောကျကစညျးကမျးသတျမှတျခကျြတှနေဲ့ ပွနျကွညျ့ပါသေးတယျ…
1. နိုငျငံ တဈနိုငျငံဟာ တဈနရောစာသာ ကိုယျစားပွု ယှဉျပွိုငျ ကစားခှငျ့ ရရှိမှာပါ…
2. ဒါပမေဲ့ တဈဦးခငျြးပွိုငျပှဲတှမှော နိုငျငံတဈနိုငျငံက ကစားသမားတှဟော ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ၁၆ အတှငျး ၂ ဦးထကျပိုပွီးဝငျတယျဆိုရငျ အဲဒီ နိုငျငံဟာ ကစားသမား နှဈဦး အထိ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရရှိပါတယျ
3. အတှဲလိုကျမှာတော့ နိုငျငံ တဈနိုငျငံတညျးက အဆငျ့ ၈ အတှငျး ၂ နရောထကျ ပိုရတယျဆိုရငျ အတှဲလိုကျ ပွိုငျပှဲတှမှော ဝငျခှငျ့ ၂ နရော အထိ ရရှိသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျနောကျတဈခကျြက တိုကျကွီး ၅ တိုကျလုံးက ကစားသမားတှေ အားလုံးပါဝငျရမယျဆိုတာကွောငျ့ ကွကျတောငျအားကစားနညျးမှာ ထိပျတနျးမှာရှိမနတေဲ့ တိုကျကွီးက နိုငျငံတှကေ အလိုအလြောကျ အနညျးဆုံး ၁ ဦးစီတော့ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခှငျ့ရအုံးမှာပါ
ဒါကွောငျ့ ကွကျတောငျအားကစားနညျးမှာ အားနညျးတဲ့ အာဖရိက နဲ့ သမုဒ်ဒရာပိုငျး ဇုံက အဆငျ့သတျမှတျခကျြ ထိပျဆုံးမှာရှိတဲ့ ကစားသမားတှကေတော့ အိုလံပဈပွိုငျပှဲကို ဝငျပွိုငျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေး ရရှိမှာပဲ ဖွဈပါတယျ
သကျထားသူဇာဟာ လကျရှိအဆငျ့နဲ့ ကွညျ့မယျဆိုရငျ သူ့အတှကျ အိုလံပဈဝငျခှငျ့မြှျောမှနျးလို့ ရပါတယျ.. ဒါပမေဲ့ အရညျအခငျြးစဈကာလက ၂၆-၄-၂၀၂၀ မှ ကုနျဆုံးမှာဆိုတော့ ဒီအတောအတှငျးမှာ အခွားသူတှကေ ပွိုငျပှဲတှေ ဝငျပွိုငျရငျး ကမ်ဘာ့အဆငျ့တှေ မွငျ့လာနိုငျတာကွောငျ့ ဆကျလကျကွိုးစားရအုံးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ
ဒီနရောမှာ အခှငျ့အရေးတဈခုရှိသေးတာက သတျမှတျအရညျအခငျြးမဝငျရငျတောငျ Tripartite Commission က ဖိတျချေါမဲ့ ၃ နရောစာအတှကျ ဝငျရောကျလြှောကျထားခှငျ့ရှိနသေေးတာပါ
ပရိသတျကွီးတို့လညျး သကျထားသူဇာ အဆငျ့တှတေကျလာဖို့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျတဲ့ ပွိုငျပှဲတိုငျး အနိုငျရဗိုလျစှဲ အောငျ အားပေးကွပါအုံးလို့ တိုကျတှနျးရငျ သကျထားသူဇာရဲ့ အိုလံပဈမြှျောလငျ့ခကျြ အလားအလာလေးကို မြှဝလေိုကျရပါတယျနျော